I-Quake3: Ungayifaka kanjani futhi uyisebenzise kanjani le Game FPS yakudala ku-GNU / Linux? | Kusuka kuLinux
I-Quake3: Ungayifaka kanjani futhi uyisebenzise kanjani le Game FPS yakudala ku-GNU / Linux?
Quake 3: Ungayifaka kanjani futhi uyisebenzise kanjani le Game FPS yakudala ku-GNU / Linux?
Kulokhu okuthunyelwe namuhla, sizokhuluma nge umdlalo omuhle wesikhathi esidlule, esizozenezela kokumangalisayo nokukhula kwethu Uhlu lwamageyimu i-del Uhlobo lwe-FPS (Umuntu Wokuqala Ukudubula). Futhi lokhu, akukho okunye ngaphandle komdala nomhlaba owaziwayo Ukuzamazama 3.
Yize, kwabashisekeli abancane kanye / noma abangaphansi kwemidlalo yevidiyo yamakhompiyutha noma ye-console, kufanelekile ukucacisa ukuthi, Ukuzamazama 3 o I-Quake III Arena kwaba ngowokuqala kwe- Ukuzamazama kudalwe okugxilwe kukho obekugxile ku- Imodi yabadlali abaningi, nokuthi ikhishwe ngomhlaka- December 2 we-1999 yinkampani Bethesda.
I-Rexuiz, i-Trepidaton ne-Smokin 'Guns: Imidlalo Engaphezulu ye-3 ye-FPS ye-GNU / Linux
Ngaphambi kokuthi ngigxumele ngqo Ukuzamazama 3, sizobuyela esandleni, esiyigugu, eside futhi sikhulayo Uhlu lwamageyimu i-del Uhlobo lwe-FPS (Umuntu Wokuqala Ukudubula) iyatholakala ukudlala ku I-GNU / Linux. Futhi, kusuka kuzixhumanisi kuya kokuthunyelwe kwethu okuhlobene kwangaphambilini:
Cube 2 - iSauerbraten
Indawo Yesitha - Ifa
Indawo Yesitha - Izimpi Zokuzamazama komhlaba
I-Wolfenstein - Indawo Yesitha
I-Urban Terror: Umdlalo omuhle kakhulu we-First Person Shooter (FPS) we-Linux
I-FPS: Imidlalo Engcono Kakhulu Yomuntu Wokudubula Etholakalayo yeLinux
1 Ukuzamazama 3: Igeyimu ye-FPS ejwayelekile edlala ukudlala
1.1 Kuyini ukuzamazama 3?
1.2 Ungayifaka kanjani futhi uyisebenzise kanjani ku-GNU / Linux?
1.2.1 Imodi 1: Ukufaka i-Quake 3
1.2.2 Imodi 2: Ukufaka i-IOQuake 3
Ukuzamazama 3: Igeyimu ye-FPS ejwayelekile edlala ukudlala
Kuyini ukuzamazama 3?
Ngoba, njengoba sishilo ngaphambili, Ukuzamazama 3 Kuyinto a Umdlalo wevidiyo we-FPS yeminyaka eminingi edlule, engaphezu kwengu-20, ku Iwebhusayithi esemthethweni, okuwukuphela kwencazelo yamanje umdlalo usayithuthukisa ngaphansi kokulandelayo:
"Uyemukelwa e-Arena, lapho amaqhawe aphambili aphendulwa ama-mush. Ukushiya noma ikuphi ukusikisela kokusebenzisa ingqondo kanye nanoma imuphi umkhondo wokungabaza, ungena endaweni yokwethuka nolasha olumnyama. Imvelo yakho entsha ikwamukela ngemigodi yodaka nobungozi besimo sezulu njengoba uzungezwe ngamabutho ezitha, okubeka ikhono elikulethe kule ndawo esivivinyweni. Imantra yakho entsha: Yilwa noma ufe."
Ngaphezu kwalokho, kulabo okuthi ngemuva kokufunda le ncwadi bakhuthazwe ukuyifaka nokuyidlala, kubalulekile ukwazi izidingo eziphansi ezinconyiwe zomdlalo, ngokuya Isayithi elisemthethweni le-Steam le-Quake 3 Okulandelayo:
"Ikhadi lemidwebo le-8 MB elinokusheshisa kwe-3D nokuxhaswa okugcwele kwe-OpenGL®, iPentium® MMX 233 MHz noma iprosesa ye-Pentium II ku-266 MHz noma i-AMD® K6®-2 ku-350 MHz enekhadi lemidwebo elingu-4 MB, i-RAM engu-64 MB, i-100% Windows® Ikhompyutha ehambisanayo ye-XP / Vista (kufaka phakathi amashayeli angama-32-bit ekhadi levidiyo, abashayeli bekhadi lomsindo namadivayisi wokufaka), u-25 MB wesikhala samahhala esingacindezelwanga kudiski eyinkimbinkimbi yamafayela womdlalo (ukufakwa okuncane), kanye no-45 MB yefayela le-Windows paging, i-100% DirectX 3.0 ikhadi lomsindo elihambisanayo, i-100% ikhibhodi ehambisanayo ye-Microsoft negundane, i-joystick (ngokuzithandela)."
Ungayifaka kanjani futhi uyisebenzise kanjani ku-GNU / Linux?
Imodi 1: Ukufaka i-Quake 3
Indlela esheshayo futhi elula yokwenza ukudlala «Quake 3» ku-GNU / Linux ukwenza okulandelayo imiyalo yokuyala ku ukuphela kwempande (ikhonsoli):
Ngemuva kwalokho, umdlalo uzofakwa emzileni «/usr/lib/quake3/» futhi umdlalo ungadlalwa ngokusebenzisa umyalo «quake3» esigungwini.
Imodi 2: Ukufaka i-IOQuake 3
Enye indlela futhi efanelekile kunazo zonke yokwenza dlala i-Quake 3 ku-GNU / Linux iyafaka «IOQuake 3», ukufeza ukusetshenziswa kwe- «Mods». Ukuze wenze lokhu, izinyathelo ezilandelayo kufanele zenziwe futhi imiyalo yokuyala ku ukuphela kwempande (ikhonsoli):
Ngemuva kwalokho kufanele uthole okungenani ifayela elibiziwe «pak0.pk3» kusuka kuwebhusayithi, ngoba, kufayela le- iwebhusayithi esemthethweni ye- «IOQuake 3», noma «archivos instaladores .run», noma «archivos extras .pk3» (Patch Data / Patches), phakathi kokunye, okumele kukopishwe kule ndlela elandelayo:
Uma isitholakele futhi yakopishwa, ingenziwa futhi idlalwe ngokusebenzisa umyalo olandelayo:
Endabeni yami uqobo, sebenzisa ngokwanelisayo amafayela atholwe kokulandelayo isixhumanisi. Ngaphezu kwalokho, kule modi yegeyimu, ikhombisa ifayela le- ukufaka umyalezo we-CD Key, okungadingeki ukubeka noma, ukwehluleka lokho, noma yikuphi ukulandelana kobude obudingekayo kungafakwa. Mina, ngafaka ukulandelana okungahleliwe okulandelayo «l2lth23ta3pcp7lp» futhi yangisebenzela ngaphandle kwenkinga, futhi yayingasakhombisi umyalezo. Ngemuva kwalokho, kusele ukudlala nokujabulela umdlalo omuhle kangaka.
Ekugcineni, labo abangabathandi balokhu Umdlalo we-FPS ungakujabulela inguqulo yamahhala online shayela Ukuzamazama Komhlaba, usebenzisa iSteam ukuyidlala I-GNU / Linux. Futhi kulabo abafuna ukwazi kabanzi ngayo, bangachofoza ku- a fan web kuwo
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe okukodwa kwe- Imidlalo ye-FPS okwakudala okudume kakhulu emlandweni okuthiwa «Quake3», manje esiba yingxenye ye- «Uhlu lwemidlalo yamahhala neyamahhala ye-FPS ye-Linux »; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Quake3: Ungayifaka kanjani futhi uyisebenzise kanjani le Game FPS yakudala ku-GNU / Linux?
I-AOS-P1: Ukuhlola i-Apple Open Source enkulu futhi ekhulayo - Ingxenye 1